Luphi na unxibelelwano nge-imeyile? | Martech Zone
Ndiwele kumkhwa ombi wokubeka ii-imeyile ecaleni ukuze zenze inyanga okanye nangaphezulu. Ndinenkqubo yokuhombisa ii-imeyile ezingenayo. Ukuba abafuni kuthathelwa ingqalelo kwangoko okanye isenzo kwithuba lexesha ukunqanda iintlungu zohlobo oluthile, ndibanike bahlale. Mhlawumbi ayonto imbi leyo. Okanye mhlawumbi akunjalo.
Esi sihloko siphela sandixubusha nomhlobo (ixhoba lam "lokulinda") malunga nendlela yokusebenzisa okanye injongo (okanye zombini) ye-imeyile etshintsha. Andinalo uphando lwezesayensi ekubhekiseni apha. Konke oku kusekwe ngokukodwa kukujonga kwam njengonxibelelwano lweshishini nanjengomntu othe, kule minyaka idlulileyo, wamkela ngokukhawuleza kwitekhnoloji entsha. (Andikho kwinqanaba eliphambili lekhefu, kodwa ndikwindawo yokuqala yethambeka elimnene.)
Cinga ngotshintsho kwindlela esinxibelelana ngayo ngokubhala. Ndithetha malunga nobunzima, hayi ubuchwepheshe be-tech, ngendlela. Emva phayaa ngemini esathumela ngayo iileta zeposi okanye ngamanye amaxesha iitelegram. Sifumene indlela yokuhambisa abo bakhawulezayo ngeenqanawa kunye neenkonzo zobusuku bonke. Kwaye kukho ifeksi. Xa i-imeyile yeza, sabhala oko kubonakala ngathi ngoonobumba? ixesha elide, iziphumlisi, iziphumlisi, upelo nolunye ulwakhiwo oluchanekileyo. Ixesha elingaphezulu uninzi lweeimeyile zikhawuleze zaba lilinye. Ngoku, izinto ezinje ngeSMS, iTwitter noFacebook zisinika ubufutshane kunye nokukhawuleza okusivumela ukuba sixhume kwenye into siye kwenye.
Yintoni ekufuneka yenziwe nge-imeyile? Okwangoku, ndisajonga i-imeyile kwifom ende, inentsingiselo, umxholo wenyani? into eyenzelwe mna okanye umntu owamkelayo ngokobuqu, kodwa ayinakuchazwa ngoonobumba abali-140. Ndisayisebenzisa nangoku ukukhangela iindaba endizicelileyo. Kwaye, ewe, ndisayisebenzisa ukuthetha nabantu abangakhange bayenze eminye imiyalezo okanye imidiya yoluntu.
Ukuba ndikweyiphi na indawo ngasekunene ngokujonga kwam, unxibelelwano lwethu lokuvela kwindalo lunempembelelo enkulu kwintengiso ye-imeyile. Ucinga ntoni? Iphi i-imeyile? Nceda uphawule apha ngezantsi. Okanye, hey, thumela i-imeyile.
tags: nyaniI-imeyile efanelekileyo yeselfowuniizaziso zosasazo zasekuhlaleniukwakha iqela
Oktobha 25, 2009 ngo-10: 52 PM
Ndicinga ukuba iyakuhlala ikhona indawo ye-imeyile… okanye ubuncinci into efana nendlela esidibana ngayo nge-imeyile namhlanje. Siza kuhlala sifuna iindlela zokunxibelelana ngokuthe ngqo ngokubhalwa komnye nomnye, kwaye sibe neemeko apho oko sikubhalayo kuya kufuneka ukuba kube neenkcukacha ezingaphezulu kwe-140 evumelekileyo.
Ubuhle betekhnoloji evelayo kukuba sinokuthi sinciphise ukungqubana kwe-imeyile yethu ngokusebenzisa ezinye iindlela zonxibelelwano ezingahambelani naloo nkcazo. I-SMS yemiyalezo emifutshane ekhawulezileyo, i-IM yokuthumela imiyalezo yexesha-lokwenyani, i-Twitter kunye ne-Facebook yokuthumela imiyalezo emininzi, i-RSS yokufumana izaziso, iGoogle Wave yokusebenzisana kweqela, njalo njalo.
Oktobha 25, 2009 ngo-10: 55 PM
Ndiyavuma ukuba i-imeyile itshintshile kancinci kodwa ngamanye amaxesha ndiyakhunjuzwa ukuba ndiyinxalenye yelo qela "labamkeli bangaphambili" ekuqaleni kwegophe. Ngesi sizathu, ngamanye amaxesha ndiyothuka xa ndikhunjuzwa ngokunxibelelana nabanye ukuba abantu abaninzi basese "ukufumana i-hang hang" ye-imeyile. Ndijonge i-imeyile njengonxibelelwano oluphakathi olusesikweni lweshishini, ngelixa iFacebook ingeyam yemiyalezo. Andinayo iakhawunti ye-imeyile yobuqu, iakhawunti yeshishini. I-imeyile kum ikwangumbindi webhokisi yam yolwazi… hayi unxibelelwano kuphela. Iincwadana zam zeendaba zingena nge-imeyile, izilumkiso zam, imiyalezo yam yeshishini, njl njl.naye ndisebenzisa i-Inbox Zero ukwenza yonke into.
Okt 26, 2009 ngexesha 2:33 AM
Enye yezinto endisokolayo kwezona zininzi nge-imeyile kukuxhomekeka kwethu kuyo. Omnye wabathengi bam unditsalele umnxeba kule veki kwaye ebuza ukuba kutheni ndingaphendulanga kwii-imeyile zakhe… ndiyaphefumlela ukuba umntu othile aqale ukuphawulwa njenge-SPAM nakwifolda yam ye-imeyile ye-Junk.
Ngelishwa ukuba i-imeyile ayivelanga. Kananjalo ayincedi ukuba abagcini be-imeyile (iMicrosoft Exchange kunye ne-Outlook) basaqhuba kubuchwephesha beminyaka eli-10 ubudala. I-Outlook isasebenza kunye neprosesa yamagama endaweni yokutshintsha ubuchwepheshe obutsha !!!
Ndiyavuma ukuba obunye ubuchwephesha buyanceda… kodwa mhlawumbi sithandazela into entsha ukuba ize nayo kuba i-imeyile inemicimbi yokuxhomekeka kakhulu.
Oktobha 26, 2009 ngo-1: 45 PM
Ngaba uyibonile le posi ivela kuTim O'Reilly?
Ngaba le ikhuthaze iposti yakho:
Oktobha 26, 2009 ngo-9: 19 PM
Ndifumana inqaku lakho kwaye bendisebenzisa i-imeyile yam kancinci kwaye uninzi lwabahlobo bam bandithumela umyalezo kwiakhawunti yeNethiwekhi yezeNtlalontle. Kodwa ndicinga ukuba i-imeyile ayifanga okanye isondele ekufeni kwayo ngokuqinisekileyo ngezinye izinto ezintsha ezongeziweyo izakuba ilapha ixesha elide.